Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị na-eri ihe na-esi ísì ụtọ icheta: Ọrịa cancer na-akpata mmetọ
Ndị na-eri Odor, nke Blistex Corp. kesara, na-eji afọ ofufo na-echeta ọtụtụ ngwaahịa ịgba Odor-Eaters arụpụtara n'etiti ụbọchị Maachị 1, 2020 na Ọgọst 22, 2021, ruo ọkwa ndị ahịa. Nnwale ime n'ime chọpụtara mmetọ benzene dị ala n'ọtụtụ ngwaahịa aerosol ndị a.
Nza anọ Odor-Eaters® Spray Powder na-emetụta ncheta afọ ofufo a, kpọmkwem:
UPC Nkọwa ngwaahịa Lot Ụbọchị mmebi
041388004310 Ndị na-esi ísì ụtọ na-efesa ntụ ntụ (113 g) LOTD20C04 EXP 03/2022
041388004310 Ndị na-esi ísì ụtọ na-efesa ntụ ntụ (113 g) LOTD20K13 EXP 10/2022
041388004310 Ndị na-esi ísì ụtọ na-efesa ntụ ntụ (113 g) LOTD21H03 EXP 08/2023
A na-ekewa Benzene dị ka carcinogen mmadụ, ihe nwere ike ịkpata ọrịa kansa dabere n'ogo na oke ikpughe. Ụmụ mmadụ gburugburu ụwa na-enwe kwa ụbọchị, ikpughe oge niile na benzene site n'ọtụtụ ebe, ma n'ime ma n'èzí. Benzene dị ebe niile na gburugburu ebe obibi. Ikpughe na benzene nwere ike ime site na iku ume, ọnụ ọnụ, na site na akpụkpọ ahụ.
A na-akwakọba ngwaahịa na-agba Odor-Eaters nke echetara n'afọ ofufo n'ime ite ikuku. E kesara ngwaahịa ndị a na mba Canada site na ndị na-ere ahịa dị iche iche. Ndị na-eri nri kwesịrị ịkwụsị iji ngwaahịa ndị a na-esi ísì ụtọ na-efesa ma tụfuo ha nke ọma. Biko lee onyonyo dị n'okpuru maka ntụzịaka maka ebe ị ga-achọta nkọwapụta koodu nza na mkpọ.
Malite na Nọvemba 18, 2021 na elekere 8 nke ụtụtụ (EST), ndị ahịa nwere ike ịnweta odoreatersrecall2021.com ịrịọ nkwụghachi ngwaahịa yana maka ozi ndị ọzọ. Ndị ahịa nwekwara ike ịkpọtụrụ 1-855-544-4821 nwere ajụjụ Mọnde ruo Fraịde site na 8:00am-5pm (EST). Ndị na-eri Odor na-agwakwa ndị na-ere ahịa ya site n'akwụkwọ ozi ma na-ahazi maka nlọghachi nke ihe niile ejirila afọ ofufo cheta ọtụtụ ngwaahịa ịgba. Ndị ahịa kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta ha ma ọ bụ onye na-ahụ maka ahụike ha ma ọ bụrụ na ha enwetala nsogbu ọ bụla nwere ike metụtara iji ngwaahịa ịgba mmiri ndị a.
Enwere ike ịkọrọ mmeghachi omume ọjọọ ma ọ bụ nsogbu dị mma enwetara na iji ọtụtụ ngwaahịa ndị a na mmemme mkpesa Health Canada's MedEffect Adverse Reaction ma ọ bụ n'ịntanetị, ozi oge niile ma ọ bụ faksị.